သီလရှင်မဝတ်ဖို့ တားမြစ်တာ၊ ကုသိုလ်အလုပ်ကို တားမြစ်တာ အပြစ်ရှိ၊ မရှိ | " မနာပဒါယီ "
သီလရှင်မဝတ်ဖို့ တားမြစ်တာ၊ ကုသိုလ်အလုပ်ကို တားမြစ်တာ အပြစ်ရှိ၊ မရှိ
။ အချိန် 4/20/2011 07:55:00 AM
Q. ၁) ဘုန်းဘုန်း.. သီလရှင် အပြီးဝတ်ချင်တဲ့ သူကို ကန့်ကွက်ရင် အပြစ်ရှိပါလား။ တပည့်တော် သီလရှင်တွေကို ကြည်ညိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သီလရှင်ဆရာလေးတွေက ရဟန်းတွေလို လှူမယ့်သူ များများမရှိတော့ မိသားစု အထောက့်အပံ့မရှိရင် ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုလို့ပါ။ မိဘတွေကဆုံးပါး မောင်နှမတွေက သူ့အိမ်ထောင်နဲ့သူမို့ မထောက်ပံ့ တာဝန်မယူနိုင်ရင် ရေရှည်မှာ ဒုက္ခရောက်မှာစိုးလို့ တားမိရင် အပြစ်ရှိပါလား။
၂) မေးချင်ပါသေးတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ သူငယ်ချုင်းတစ်စုထဲမှာ ရသမျှ လခကို နေစရိတ်စားစရိတ်နဲ့ မုန့်ဖိုးပဲယူပြီး ဘုရားကို အကုန်လှူနေသူရှိပါတယ်။ ဘုရားကိုလှူတယ်လို့ သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ သူ့ဝင်ငွေ အများစုကို သူ့ဇာတိမှ သံဃာတွေကို ဆွမ်းလောင်း၊ ပညာရေးထောက်ပံ့ လုပ်ပါတယ်။ သူ့ဖို့ကိုတော့ ဆေးလိပ်မသောက် အရက်မသောက် အဝတ်အစားတောင် ခြိုးခြံပါတယ်။ တရားလဲထိုင်တော့ ဒီလိုစိတ် ဝင်သွားတာ ထင်ပါတယ်။ နောင်ရေးစုဆောင်းဖို့ပြောလဲ သူမရှာဖွေနိုင် နာမကျန်းဖြစ်လာမယ်ဆို စုသင့်စုမယ်။ ခုငယ်တုန်း သန်မာတုန်း ဘုရားကို လုပ်ကျွေးနိုင်တုန်း လုပ်ကျွေးမယ် ပြောပါတယ်။ သူ အရမ်းကံကောင်းနေတာတွေတော့ တွေ့တွေ့နေရပါတယ်။ သူ့နေပုံကို တားရင်ရော သူဒီလောက် ကံကောင်းပါ့တော့မလား။ တားတဲ့သူရော အပြစ်ဖြစ်မလား ဘုန်းဘုန်း။
A. ၁) သီလရှင်ဝတ်တာကို တားမြစ်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အပြစ်ရှိမရှိဆိုတာ တားမြစ်တဲ့သူရဲ့ စေတနာအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ စေတနာဆိုးနဲ့ မဟုတ်ဘဲ စေတနာကောင်းနဲ့ တားမြစ်တာဖြစ်လို့ အပြစ်မရှိနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သီလရှင်ဘဝမှာ အနေအထိုင်၊ အစားအသောက် ဆင်းရဲမှာစိုးတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကတော့ ကိုယ်က လောကီအရေးကို ဦးစားပေးသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ကာယကံရှင်ရဲ့ စိတ်စေတနာက သီလရှင်ဘဝမှာ အနေချောင်၊ အစားချောင်ချင်လို့ မဟုတ်ဘဲ ကုသိုလ်ရချင်လို့ လူ့ဘဝကဒုက္ခတွေ ငြိမ်းချမ်းလို့ စတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေ ပြင်းပြနေရင် ဝတ်ခွင့်ပေးတာ ကောင်းပါတယ်။ သီလရှင်ဘဝဟာ ရဟန်းတွေလောက် ပစ္စည်းလာဘ်လာဘ မပြည့်စုံပေမယ့် ဘုရားအလုပ်ကို ကျိုးစားလုပ်နေရင် ဘုရားက ကျွေးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာနဲ့သူတော့ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ သီလရှင်မဝင်ခင် ဝတ်မယ့်ဆရာနဲ့ ဝတ်မယ့်နေရာကို သေချာရွေးချယ်ပြီး ဝတ်မယ်ဆိုရင် ဒုက္ခရောက်စရာ မရှိပါဘူး။ ဒုက္ခရောက်လည်း ဘဝဒုက္ခ၊ သံသရာဒုက္ခတွေနဲ့စာရင် မဆိုစလောက်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂) သူငယ်ချင်းရဲ့ ရတနာသုံးပါး အပေါ်မှာ ထားတဲ့သဒ္ဓါတရားကတော့ တကယ့်ကို လေးစားထိုက်တဲ့ သဒ္ဓါတရားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားရဲ့ တရားတော်တွေကို လက်တွေ့ကျင့်ကြံ အားထုတ်လာရင် အဲဒီလို သဒ္ဓါတရားတွေ တိုးပွားလာတတ်ပါတယ်။ ရှာဖွေသောက်စားပြီး ပိုက်ဆံစုတာထက်စာရင် သောက်မယ့်စားမယ့် အရာတွေထဲက စုဆောင်းပြီး ကုသိုလ်ကောင်းမှု လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုလို့တောင် အကျိုးတရား များလှပါသေးတယ်။ ဒီလို သဒ္ဓါတရား ကောင်းပေမယ့် သူ့နောင်ရေးအတွက် ကိုယ်ကပူလို့ ပြောတာဆိုတော့ အပြစ်တော့ မဖြစ်ပါဘူး။ သူလုပ်နေတဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ လက်တွေ့မလုပ်ဖြစ်အောင် တားမြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ အပြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူအနေနဲ့ သဒ္ဓါတရားကြောင့် အလှူအတန်းအပေါ် ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်တာကောင်းပေမယ့် မျှမျှတတ လုပ်တာကောင်းပါတယ်။ သေချာတာကတော့ တရားကိုစောင့်တဲ့သူကို တရားကပြန်စောင့်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်က သေချာနေတဲ့အတွက် ကုသိုလ်ကောင်းမှုအပေါ်မှာ သဒ္ဓါအားကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူအတွက် သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံတွေက သူ့ကိုစောင့်ရှောက်နေမှာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သဒ္ဓါကောင်းတဲ့သူအတွက် ကံကောင်းနေမှာဖြစ်ပြီး မကောင်းခဲ့လည်းပဲ အခိုက်အတံ့လောက်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
စုစည်းထားမှု = မေးဖြေပြီးသမျှ [Q / A]
ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက်၏ မှန်ကန်သည့် ယုံကြည်မှုနှင့် အယူဝါ...
စိတ်အားဖြည့် စကားစုလေးများ (၁၁)…
သီလရှင်မဝတ်ဖို့ တားမြစ်တာ၊ ကုသိုလ်အလုပ်ကို တားမြစ်...
ပြည်တော် မပြန်နိုင်သေးသူများနှင့် ပြည်တော် မနေနိုင...
သီလလုံခြင်း၊ မလုံခြင်းရဲ့ အကျိုး၊ အပြစ်များ…
နဲနဲလေးတော့ လွဲနေတယ် (၁၉)...